Sida loo banneeyo booska iCloud | War gadget
Sanadihii la soo dhaafay, booska lagu keydiyo ee daruurta ayaa mudnaan u yeeshay dhammaan kuwa isticmaala ee u baahan, haa ama haa, inay had iyo jeer gacanta ku hayaan faylashooda mar walba. Waxaan hadda gacanta ku haynaa adeegyo badan oo kayd ah oo Waxay noo fidiyaan qadar GB ah oo bilaash ah.
Dhamaan adeegyada aan gacanta ku hayno, Google Drive ayaa ugu deeqsi badan dhamaantiis oo leh 15 GB bilaash ah halka Microsoft's OneDrive iyo Apple's iCloud ay yihiin kuwa ugu bakhayl badan. In kasta oo ay run tahay inay jiraan adeegyo badan oo kaydinta ah, oo ku xidhan soo saaraha softiweerka ayaa ah saddexdan uun. Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid kaydinta daruuraha Apple, hoos ayaan ku tusi doonaa sida loo furo booska iCloud.
Isticmaala kasta oo leh koonto la xiriirta adeegyada Apple, wuxuu leeyahay 5 GB oo bannaan oo gabi ahaanba xor u ah inuu kaydiyo nuqulada keydka boosteejooyinkooda oo ay la socdaan xogta ajendahooda, kalandarka, dejimaha qalabka iyo runtii wax kale, si dhib leh uma haysanno meel aan ku kaydinno nuqul dhammaan sawirrada in aan ku sameyno qalabkeena.
Laakiin, inkasta oo inkasta oo aad kireysatey meel dheeraad ah oo lagu keydiyo daruurta Apple, waxaad aragtaa sida booska ay ku keydsan yihiin xogtaadu uu u sii kordhayo marar badan, iyadoo aan la qaadin sawirrada ama fiidiyowga aad qaadatid inay sabab u yihiin, markaa waxaan u socon doonnaa falanqee waxa sababi kara sababaha, waxa runti ay tahay iyo sida aan u banneeyn karno booska.
1 Muxuu kaydiyaa iCloud
2 Sideen ugu furi karaa barta iCloud
2.1 Tirtir kaydinta
2.2 Ka tirtir sawirada iyo fiidiyowyada iCloud
2.3 Kireyso meel badan oo keyd ah
Muxuu kaydiyaa iCloud
iCloud kaliya noo oggolaan mayso inaan kaydinno xogta ajandaheena, jadwalka iyo dejimaha qalabka (taas oo runtii ay u dhalatay), laakiin sidoo kale, maadaama sannadihii la soo dhaafay, iyo adeegyadii ay bixisay Apple ay kordheen, kuwan waa la kordhiyay, sidaa darteed meesha bannaan ee la heli karo, 5 GB (oo la mid ah bilowgii) weli way sii jirtaa lagu qoslo.
Xogta ay kaydiyaan iCloud maanta waa:
Sawirro (haddii aan ikhtiyaarkan firfircoonaanno)
E-mailada emaylkeena ka socda iCloud
Calaamadaha Safari iyo taariikhda
Hawlaha iCloud kuma koobna oo keliya in lagu kaydiyo nuqul dhammaan xogtayada daruuraha, laakiin sidoo kale waxay daryeeshaa iskuwaafajinta dhammaan xogta dhammaan aaladaha laxiriira isla Aqoonsiga Apple. Sidan oo kale, haddii aan xiriir cusub ku dareyno iPhone-ka, dhowr ilbiriqsiyo ka dib, wuxuu sidoo kale ka muuqanayaa iPad-kayga iyo Mac-da, isla sidaas oo kale ayaa dhacda haddii aan wax ka bedelno ama ku darno xiriir cusub oo ku saabsan iPad-keena ama Mac, xiriir cusub oo dhowr ilbiriqsi kadib Waxaa sidoo kale laga heli doonaa iPhone-ka.
Qaabkan shaqeynta sidoo kale waxaa laga heli karaa jadwalka, xusuusinta, qoraalada, fariimaha, calaamadaha Safari, keychain ... Sida aan arki karno, adeegga iCloud ee la xiriira aaladaha Apple wuxuu ka badan yahay kaliya keydinta xogta aaladahayaga. Ka sokow, sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan maamulno qalabkeena meel fog haddii ay dhacdo in la waayo ama la xado iyada oo loo marayo muuqaalka Raadi My iPhone / iPad.
Sideen ugu furi karaa barta iCloud
Haddii aynaan haysan Sawirada ku jira sanduuqa iCloud ee la hubiyey, tani waxay noqon doontaa hubaal adeegga ku jira booska ugu badan ee koontadayada maaddaama ay tahay halka ay ku keydsan yihiin dhammaan asalka sawirrada iyo fiidiyowyada aan ku sameyno aaladdayada, iyadoo laga tegayo nuqul ka yar (waxaan ugu yeeri karnaa thumbnail) labada sawir iyo fiidiyowyada qalabka ku jira.
Haddii aan dooneyno inaan ka helno qalabkeenna, waa inaan tagno ciribta oo aan u aragno sida aan caadada u ahaan jirnay, maaddaama internetka internetka si toos ah loogala soo bixi doono sawirka haddii ay tahay fiidiyoow, wuxuu bilaabi doonaa inuu ku ciyaaro ka soo qulqulaya server ka Apple. Haddii aan rabno inaan sii dayno booska aan ku haysanno annaga oo adeegsanaya iCloud, Waxaan haynaa xulashooyin kala duwan oo aan hoos ku faahfaahinayno:
Apple waxay noo diyaarineysaa xulashooyinka ay na siiso iyada oo loo marayo iCloud, suurtagalnimada in lagu sameeyo nuqul nuqul ah iyada oo loo marayo iCloud ee xogta koontadayada sida xisaabaadka, dukumiintiyada, qaabeynta arjiga Guriga iyo Nidaamyada bartayada. Haddii terminaalkeena uu keydiyo macluumaad badan, booska uu ku fadhiisan karo koontadeena iCloud wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya. Sidoo kale, haddii aan haysanno wax ka badan hal qalab dhammaantoodna ay leeyihiin keyd, booska la haysto wuxuu noqon karaa mid cabsi leh.
Haddii aad rabto inaad iska furto booska iCloud, waad awoodaa gab gabadan oo ka dhig iyaga oo loo maro iTunes, si nuquladu aysan u buuxin booskii aad qandaraaska kula gashay iCloud. Faa'iido darrooyinka naloo soo bandhigay ayaa ah in kaydinta ku jirta iCloud ee terminalkeenna la sameeyo habeen kasta inta aan lacag ka qaadaynno aaladahayaga, sidaa darteed waa inaan qabannaa isla hawlgal kasta habeen kasta iyada oo loo marayo iTunes, wax dad aad u tiro yar ay diyaar u yihiin inay sameeyaan.
Ka tirtir sawirada iyo fiidiyowyada iCloud
Meesha ay ku jiraan labada sawir iyo fiidiyow ee ku keydsan koontadayada iCloud Iyagu waa kuwa inta badan mashquuliya. Haddii aan leenahay qorshe kayd ah oo qandaraas ah oo aanan dooneynin inaan ballaarinno, xalka dib loogu soo ceshado booska bilaashka ah waa in nuqul nuqul ah laga sameeyo dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku keydinnay dirawalkeenna adag oo aan ka tirtirno iCloud, si si aad u soo ceshato booska adiga oo aan kiraysanin meel badan oo keyd ah.
Kireyso meel badan oo keyd ah
Sanadihii la soo dhaafay, qiimaha adeegyada kaydinta hoos ayuu u dhacay maantana waxaan heysanaa 50 GB oo iCloud ah oo aan ku heyno kaliya 0,99 euro / bishii. Haddii aan rabno meel badan oo wax lagu keydiyo, waxaan haysannaa 200 GB oo ah 2,99 euro / s ama 2 TB 9,99 euro / bishii.
Haddii aan nahay isticmaaleyaal aalado dhowr ah oo Apple ah, ikhtiyaarka ugu fiican ee aan ku haysanno waa iCloud mahadsanid isdhexgalka ay na siiso dhammaan nidaamka deegaanka. Dheeraad ah, qiimaha ficil ahaan waa isku mid sida kuwa ay bixiyaan inta kale ee lagu beddeli karo, ha noqoto Google Drive, Dropbox ama OneDrive.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo xoreeyo booska iCloud